Mubhedha wechipatara unowanzoreva mubhedha wevacheche, uyo unogadzirirwa zvinoenderana nezvinodiwa nemurwere uye tsika dzakazara mubhedha, uye yakagadzirirwa nenhengo dzemhuri kuti dziperekedze. Iyo ine akawanda mabasa eukoti uye ekushanda mabhatani. Inoshandisa insul ...Verenga zvimwe »
Basa rekusimudza kwevarwere vakaoma mitezo: Kufambisa vanhu nekufamba kusinganakidze kubva panzvimbo imwe kuenda pane imwe kunogona kusimudza murwere kubva pasi kuenda pamubhedha; tsoka dzechassis dzinogona kuvhurwa kuti dzive padyo nemurwere; vhiri rekumashure rine bhureki rinogona kupwanya kuti rive preve ...Verenga zvimwe »
Disposable Medical maskVerenga zvimwe »
simba mubhedha wechipatara, kumeso muromo mask, kurapa kuraswa, mabhedha ekuchengetedza zvakanyanya, zvakazara muchipatara mubhedha, recliner mubhedha wevarwere,
recliner mubhedha wevarwere, kurapa kuraswa, mabhedha ekuchengetedza zvakanyanya, simba mubhedha wechipatara, kumeso muromo mask, zvakazara muchipatara mubhedha,